Zvapupu zvaJehovha—Mushumo wa2016 Wenyaya Dzemumatare
Hama nehanzvadzi dzedu dziri kuramba dzakavimbika kuna Jehovha Mwari pasinei nemamiriro ezvinhu akaoma uye kumiswa mumatare. Izvi zvinotikurudzira tese kuti timire takasimba mukutenda tichivimba kuti “Jehovha [achaitira zvakanaka] munhu wake akavimbika.”​—Pis. 4:3.
ARGENTINA | Kodzero Yekudzidzisa Mwana Zvechitendero
Ruth akakurira mumhuri yechiKristu, asi akazomira kuita mabasa echiKristu achiri mudiki. Pava paya, akazodanana nemumwe murume ndokuzova nemwana musikana. Rimwe zuva, Ruth paaiva muguta reLa Plata, akaona Zvapupu zvichiparidza patafura ndokufungazve nezveushamwari hwake naMwari. Izvi zvakamuita kuti awadzanezve neungano ndokutanga kudzidzisa mwanasikana wake Bhaibheri. Murume wake akatanga kupikisa zvaaiita ndokuendesa nyaya yacho kudare redzimhosva kuti rirambidze Ruth kudzidzisa mwanasikana wavo Bhaibheri uye kuenda naye kumisangano.
Gweta raRuth rakati vabereki vese vane kodzero yekudzidzisa mwana wavo zvavanotenda uye dare harifaniri kupindira pakodzero iyoyo kunze kwekunge paine uchapupu hwekuti zvaari kudzidziswa zviri kumukanganisa. Dare racho rakati vabereki vacho vaifanira kuremekedza kodzero yemwanasikana wavo yekusarudza chitendero chaanoda, kunyange zvazvo aingova nemakore 4! Dare rakakwidzwa nyaya yacho rakajekesa kuti mwana wacho ainge achiri mudiki kuti azvisarudzire zvaanoda kudzidza panyaya yekunamata, uye kuti vabereki vacho vese vane kodzero yakaenzana yekudzidzisa mwana wavo zvekunamata.
Mwanasikana waRuth anoverenga Bhaibheri manheru ega ega uye ava kuenda kumisangano naamai vake. Anoda chaizvo kuzoshanyira Bheteri riri kuBuenos Aires.
AZERBAIJAN | Kodzero Yekuratidza Zvavanotenda
Muapostora Pauro akaona kuti muungano yechiKristu chechokwadi, “kana nhengo imwe chete ikatambura, dzimwe nhengo dzose dzinotambura pamwe chete nayo.” (1 VaK. 12:26) Mashoko iwayo akaratidza kuti ndeechokwadi sezvo Zvapupu zvaJehovha pasi rese zvakarwadziwa nekutambura kwaiita Hanzvadzi Irina Zakharchenko naValida Jabrayilova kuAzerbaijan. Muna February 2015, hurumende yakati hanzvadzi mbiri idzodzo dzaiva nemhosva yekuita mabasa echitendero asingabvumirwi nemutemo. Mutongi wemudare akaita kuti vavharirwe vachimirira kuti nyaya yavo itongwe, asi nekuti nyaya yacho yaingoramba ichisundirwa mberi, vakazopedza rinenge gore vari mujeri, vachiitirwa utsinye uye vachinyimwa zvimwe zvinhu.
Azerbaijan: Valida Jabrayilova naIrina Zakharchenko
Nyaya yavo payakazopinda mudare muna January 2016, mutongi wemudare akati hanzvadzi dzacho dzaiva nemhosva uye dzaifanira kubhadhara faindi, asi akazoti vasabhadhara havo nekuti vakanga vambovharirwa nyaya yavo isati yatongwa, saka vaifanira havo kudzokera kumba. Dare rekuBaku rakakwidzwa nyaya yacho parakaramba chichemo chavo pane zvavaipomerwa, vakabva vaikwidza kuDare Repamusorosoro. Uyewo vakaendesa zvichemo zvavo kuUN Human Rights Committee nezvekusabatwa kwavo zvakanaka nekutyorwa kwekodzero yavo yekuratidza zvavanotenda.
Iye zvino, hanzvadzi idzi dziri kumbozorora panhamo yadzakasangana nayo. Vakatenda chaizvo kukurudzirwa nekunyengetererwa kakawanda kwavaiitwa. Hanzvadzi Jabrayilova vakanyorera Dare Rinotungamirira kuti: “Ndinonyatsonzwa kuti minyengetero yenyu yakatibatsira kutsungirira dambudziko racho. Handimbokanganwi rudo rwamakaratidza, rwakaratidzwa naJehovha nehama nehanzvadzi dziri munyika yese.”
ERITREA | Vakasungirwa Kutenda Kwavo
Pakasvika July 2016, hurumende yeEritrea yakanga yasunga Zvapupu zvaJehovha 55 nenyaya yekutenda kwazvo. Kubva muna September 1994 hama nhatu dzinoti​—Paulos Eyassu, Isaac Mogos, naNegede Teklemariam​—dzange dziri mujeri, uyewo dzimwe hama 9 dzava nemakore anopfuura 10 dzakasungwa nehurumende yeko.
Muna January 2016, pane zvakanaka zvakaitika pakamiswa Zvapupu zvaJehovha pamberi pedare redzimhosva izvo zvakanga zvasungwa paChirangaridzo chakaitirwa muAsmara muna April 2014. Aka kaiva kekutanga kuti hurumende itaure kuti Zvapupu zvine “mhosva” uye kuzvipa mukana wekuzvidzivirira mudare. Zvisinei, vakawanda vehama nehanzvadzi dzainge dzaendeswa kudare vakapiwa mhosva yekuita musangano “usingabvumirwi nemutemo” uye vakabhadhariswa faindi ndokusunungurwa. Asi mumwe wehanzvadzi dzaipomerwa mhosva anonzi Saron Gebru, akaramba kubhadhara faindi. Saka akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 6. Vanhu vaibvumirwa kunomuona kamwe chete pavhiki uye akati aibatwa hake zvakanaka. Iye nezvimwewo Zvapupu 54 zviri mujeri vanokoshesa chaizvo kuvanyengeterera kwatinoita sezvo tese ‘tichiramba tichifunga vaya vakasungwa nezvisungo zvemujeri sekunge kuti takasungwa pamwe chete navo.’​—VaH. 13:3.
GERMANY | Rusununguko Rwekunamata​—Kuzivikanwa Zviri Pamutemo
Musi wa21 December 2015, vakuru vakuru vemunharaunda yeBremen, iri pakati pekuchamhembe nekumavirira kweGermany, vakazoita kuti Religious Association yeZvapupu zvaJehovha muGermany inyatsozivikanwa zviri pamutemo kupfuura zvayaimboitwa. Izvi zvakagumisa nyaya yakanga yava nemakore 4 ichinetsa mumatare ekuGermany. Dzichitevedzera mutongo wakapiwa neHigher Administrative Court yemuBerlin, panharaunda 16 dzemuGermany, dzakawanda dzacho dzakabvumirawo Zvapupu zvaJehovha kuti zvizivikanwe zviri pamutemo. Asi vakuru vakuru vekuBremen vakaramba kuti Zvapupu zvizivikanwe zviri pamutemo, nemhaka yenhema dzaiparadzirwa nevashori.
Muna 2015, Federal Constitutional Court yeGermany yakagumisa kuti maererano nemutemo, nharaunda yeBremen yainge yatyora kodzero yeZvapupu yekuzivikanwa zviri pamutemo. Mutongo wacho unoratidza kuti bumbiro remutemo rinobvumira Zvapupu zvekuBremen kunamata zvakasununguka. Saka ungano dzeko hadzifaniri kubhadhariswa mutero uye dzinofanira kuitirwawo zvakanaka sezvimwe zvitendero zvemuGermany.
KYRGYZSTAN | Kodzero Yekuratidza Zvavanotenda
Muna March 2013, vakuru vakuru vemuOsh, kuKyrgyzstan, vakati Oksana Koriakina naamai vake Nadezhda Sergienko vaiva nemhosva. Gweta rehurumende rakapomera Zvapupu izvi kuti zvaibiridzira vanhu pazvaiudza vavakidzani vazvo mashoko emuBhaibheri, uye mutongi wemudare akati havachabvumirwi kubva pamba pavo kusvikira nyaya yacho yapera kutongwa. Muna October 2014, dare racho rakazoona kuti uchapupu hwacho hwaiva hwekunyepa, painge patorwa matanho asiri iwo uye hanzvadzi dzedu dzainge dzisina mhosva. Muna October 2015, dare rakakwidzwa nyaya yacho rakabvumiranawo nazvo.
Zvisinei, gweta riya rakakwidzazve nyaya yacho kuDare Repamusorosoro remuKyrgyzstan. Dare racho rakadzima zvakanga zvatongwa nematare aiva pasi rikati nyaya yacho itongwe patsva. Payakapinda mudare muna April 2016, magweta aimiririra hanzvadzi dzacho akakumbira kuti nyaya yacho irege kuenderera mberi sezvo mutemo wakanga washandiswa panyaya iyi wakanga usisashandi. Hapana zvimwe zvaigona kuitwa nemutongi wemudare kunze kwekukanzura nyaya yacho.
Panguva yese yadzaiva mudambudziko iri, hanzvadzi dzacho dzaingoramba dziine mufaro. Hanzvadzi Sergienko vakati, “Kazhinji vanhu pavanoitirwa zvakaipa vanogumbuka, asi ini ndaiona kuti Jehovha aindiratidza rudo achishandisa hama nehanzvadzi, saka taisava tega.” Hanzvadzi dzacho dzakazvionera kuti Jehovha ari kuzadzisa vimbiso yake iri pana Isaya 41:10 yekuti: “Usatya . . . Chokwadi ndicharamba ndakakubata zvakasimba noruoko rwangu rworudyi rwokururama.”
KYRGYZSTAN | Rusununguko Rwekunamata—Kuzivikanwa Zviri Pamutemo
Musi wa9 August 2015, mapurisa 10 akangoti pindikiti pane mumwe musangano weungano muguta reOsh, kuKyrgyzstan. Vakati musangano “usiri pamutemo” waifanira kumira pakarepo uye vakatiwo vaigona kutopfura vanhu vaidarika 40 vaivapo. Mapurisa acho akatora hama 10 akaenda nadzo kukamba yavo uko kwavakanorova 9 vacho nekuvabata zvisina kunaka, ndokuzovabudisa. Papera mazuva maviri, mapurisa akasunga Nurlan Usupbaev, mumwe wehama dzakarohwa chaizvo uye vakamupomera mhosva yekuitisa musangano usiri pamutemo.
Nyaya yaHama Usupbaev payakapinda muOsh City Court, mutongi akashaya uchapupu hwezvavaipomerwa ndokukanzura nyaya yacho. Gweta rehurumende rakakwidza nyaya yacho kuOsh Regional Court, asi dare racho rakaramba kuitongazve, richiti Hama Usupbaev havana mhosva yekuitisa musangano zvisiri pamutemo nekuti Zvapupu zvaJehovha zvakanyoreswa zviri pamutemo muKyrgyzstan.
Gweta racho rakabva rakwidzazve nyaya yacho kuDare Repamusorosoro remuKyrgyzstan. Hama Usupbaev vakanzwa vazorodzwa dare racho parakakanzura nyaya iyi muna March 2016, zvikaita kuti mitongo yakapiwa nematare ese irambe yakadaro, zvichisimbisazve kuti Zvapupu zvaJehovha zvine kodzero yekuita misangano yazvo muKyrgyzstan. Hama dzakarohwa nemapurisa emuOsh dzakazoendesawo nyaya yadzo kudare uye nyaya yacho ichiri kutongwa.
RUSSIA | Rusununguko Rwekunamata
Hurumende yeRussia iri kungoramba ichinetsa Zvapupu zvaJehovha pasinei nekupikiswa kwairi kuitwa nevakuru vakuru vanoona nezvekodzero dzevanhu muRussia. Iye zvino, hurumende yacho iri kuti mabhuku edu 88 “anokurudzira kupandukira hurumende” uye yakabhana website yeZvapupu zvaJehovha yejw.org. Muna 2015, vanoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika vakaramba kuti Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene ipinde muRussia. Uyewo dare riri muVyborg richiri kuongorora kuti ropa here mutongo wekuti shanduro iyi yeBhaibheri “inokurudzira kupandukira hurumende.” Muna March 2016, Prosecutor General’s Office yakatora matanho akasimba chaizvo, yakati yaigona kuvhara mahofisi eZvapupu zvaJehovha ari muSolnechnoye, nechekunze kweguta reSt. Petersburg, ichiti “pari kuitwa zvinhu zvinokurudzira kupandukira hurumende.”
Pasinei nezvaiitwa nehurumende pakupikiswa kweZvapupu zvaJehovha, pane zvimwewo zvakanaka zvakaitika. Muna October 2015, rimwe gweta rehurumende rakakwidza kudare nyaya yekuti Local Religious Organization (LRO) yemuTyumen, iri makiromita 2 100 kumabvazuva kweMoscow ivharwe. Pasinei nekuti Tyumen Regional Court yaiziva kuti mapurisa akanga atsvaga uchapupu hwekunyepa kuti aroverere Zvapupu, yakangoti sangano reZvapupu reLRO remuTyumen raiva nemhosva. Asi musi wa15 April 2016, Dare Repamusorosoro remuRussia rakadzima mitongo yakanga yapiwa nematare epasi, ndokupa mutongo wekuti “hapana zvikonzero zvekuvharisa sangano iroro.” Mutongi paakaverenga mutongo wacho, hama nehanzvadzi 60 dzaiva mudare racho dzakasimuka dzichirova maoko nekufara.
Vanhu vaJehovha kuRussia, vakatsunga kuramba vachimunamata pasinei ‘nechombo chero chipi zvacho chingagadzirirwa kuvarwisa.’​—Isa. 54:17.
RUSSIA INORAMBIDZA RUSUNUNGUKO RWEKUNAMATA
KUBVA MUNA 2010:
MABHUKU 88 AKABHANWA
WEBSITE YEDU YAKABHANWA
NZVIMBO NEZVIVAKO ZVEKUNAMATIRA ZVAKATORWA NECHISIMBA
MABHUKU ESE AKARAMBIDZWA KUPINDA MUNYIKA
MAZANA EVANHU VAKASUNGWA
MWEDZI 8 YEKUTANGA YA2016:
HURUMENDE YAKATI IRI KUDA KUVHARA HOFISI YEMUNYIKA YACHO
16 VANHU VAKAPIWA MITONGO
64 DZIMBA DZEHAMA NEDZEKUNAMATIRA DZAKASECHWA
64 KUSUNGWA/ KUVHARIRWA
RWANDA | Kodzero Yekudzidza Vasingasarurwi Nekuda Kwechitendero
Mumakore achangopfuura, vana veZvapupu vekuRwanda vaidzingwa chikoro nekuti vairamba kutsigira zvemachechi kana kuti zvenyika zvinoitwa kuzvikoro. Hurumende yakafunga kupedza dambudziko iri, saka musi wa14 December 2015 yakanyora gwaro rekupedza nyaya yekusarurwa nekuda kwechitendero yaiitwa muzvikoro. Gwaro racho raiti zvikoro zvinofanira kuremekedza kodzero dzevana dzekusarudza zvavanoda panyaya dzekunamata.
Musi wa9 June 2016, chikamu chepajw.org yeChirungu chakanzi Newsroom, chakabudisa nyaya yakanzi “Rwanda Acts to Counter Religious Discrimination in Schools.” Chinofadza ndechekuti rimwe pepanhau repaIndaneti remuRwanda rakabudisazve nyaya yacho. Pasina nguva, vanhu vanopfuura 3 000 vakaenda pawebsite yepepanhau racho ndokuverenga nyaya iyi, uye vakawanda vakanyora mashoko ekuratidza kufarira zvainge zvaitwa nehurumende. Zvapupu zvekuRwanda zviri kufarira mashoko ari mugwaro racho ekuti vana vavo vava kukwanisa kudzidza vasingasarurwi nekuda kwechitendero chavo.
Rwanda: Vakadzokera kuchikoro
SOUTH KOREA | Kodzero Yekushandisa Hana​—Kuramba Kupinda Muchiuto Pamusana Pehana
Pava nemakore anodarika 60, hama dzekuSouth Korea dzine makore ari pakati pe19 ne35 dzichinzi dzinofanira kupinda muchiuto. Hurumende yekuSouth Korea haipi vanhu kodzero yekuramba kuita mamwe mabasa pamusana pehana dzavo uye haipi mamwe mabasa emuhurumende asiri echiuto. Saka pamwe pacho mhuri yese yeZvapupu, kubvira kuna sekuru, baba nemwanakomana, vese pavainzi vapinde muchiuto vakanga vasina zvimwe zvekuita kunze kwekungonovharirwa mujeri.
Constitutional Court yakapa mutongo kaviri ichitaura kuti Mutemo Wekuita Basa Rechiuto uri mubumbiro remutemo, asi matare epasi nevanhu vari kurangwa nekuda kwemutemo iwoyo vari kungoramba vachiunza nyaya yacho kwairi. Musi wa9 July 2015, Dare rakazoteerera zvikonzero zvevanhu vanoramba kuita mamwe mabasa nekuda kwehana dzavo. Hama Min-hwan Kim, avo vakaita mwedzi 18 vari mujeri nekuti hana yavo yaisavabvumira kudzidzira basa rechiuto, vanoti: “Ndakapiwa chirango ndokuzobudiswa mujeri. Asi ndinovimba kuti vamwewo vakawanda vane hana dzisingavabvumiri havazorangwi. Kana vakabvumirwa kuita mamwe mabasa asiri echiuto, vanenge vachitobatsira vanhu vemunharaunda.” Nekukurumidza, Constitutional Court ichazivisa mutongo wayo panyaya iyi.
Hama Hemdemov, vane makore 53, uye vane mudzimai nevanakomana 4. Vanoshingaira pane zvekunamata uye vanoremekedzwa chaizvo munharaunda. Muna May 2015, rimwe dare rakavatongera kugara mujeri kwemakore, vachishanda zvakaomarara nekuti vakaita musangano kumba kwavo uyo wainzi “hausi pamutemo.” Vakavharirwa mujeri rinoshandiswa vanhu zvekufa riri mutaundi reSeydi, umo mavari kuramba vachingobvunzurudzwa nekurohwa chaizvo nevanhu vehurumende. Asi vari kuramba vakaperera kuna Jehovha Mwari sezviri kuitwa nemhuri yavo. Mudzimai waHama Hemdemov anonzi Gulzira, ari kukwanisa kupota achivashanyira kuti anovasimbisa.
Patinoona vanhu vaJehovha vachiramba vakavimbika pavanosangana nemiedzo, tinovanyengeterera. Muenzaniso wavo unoitawo kuti tide kuramba takavimbika kuna Jehovha, tichivimba nemashoko ari pana Pisarema 37:28 ekuti: “Haazosiyi vakavimbika vake.”